Soo ogow faa iidooyinka isticmaalka saliida timaha | Bezzia
Waa maxay sababta ay tahay inaad u isticmaasho serum timo
Susana Garcia | 03/04/2021 20:00 | Quruxda, Alaabta quruxda
Macno malahan hadii timahaagu dheeryihiin, gaabanyihiin, leeyihiin, toosanyihiin, bunni yihiin, bunni yihiin ama timo cad yihiin, maxaa yeelay waxa badanaa aakhirka aakhirka ah inaad caafimaad qabtid oo aad daryeeshid timo, wax aan si fudud lagu gaari karin. Xoogaa waan ku siinaynaa imisa fikradood oo lagu barto sida loo isticmaalo serum timaha. Sida aan u daryeelno wajigeena, waa lagama maarmaan in sidoo kale loo daryeelo caafimaadka timaha. Waa lagama maarmaan in lagu dalbado alaabada lagama maarmaanka ah tan.
Waan ka hadlaynaa maxaad u isticmaali lahayd serum timo iyo faa iidooyinka kujira. Serumku waa shey aan sidoo kale u aragno wajiga oo isku soo uruuriyay maaddooyin firfircoon si qoto dheer loogu daryeelo timaha, looguna dhaqmo meeshii looga baahdo, maadaama ay jiraan noocyo badan oo dhiig ah.
1 Maxaa loogu talagalay
2 Sidee loo adeegsadaa serum
3 Serum for timo kasta
El Serum timaha waa wax soo saar wax ku ool ah si ay u qaataan daryeelka ugu badan ee timaha kuwaas oo aad u dhaawacmay ama u baahan daryeel dheeri ah, oo ka baxsan waxa aan ku bixino maalin-ka-maalin. Alaabtan waxaa badanaa jira uruurinta sare ee maaddooyinka firfircoon ee ka caawiya hagaajinta dhaawaca bilaha timaha, markaa sida caadiga ah waxay yihiin qurxiyo aad u qaali ah. In kasta oo ay sidoo kale run tahay in serum-yada la adeegsado oo keliya waqti ka waqti, si loogu sameeyo daaweynta daryeelka timaha. Waxaad ka heli kartaa serum la jaanqaadaya baahiyo kala duwan, laakiin runtu waxay tahay in noocyada noocan ah guud ahaan ay u janjeeraan inay siiyaan timo dhalaalaya, xiritaanka maqaarka, u waraabiya iyo daryeelka madaxa.
Sidee loo adeegsadaa serum
El serum timaha waxaa badanaa lagu mariyaa tiro aad u yarMaaddaama ay tahay badeecad urursan, waa in aynaan isticmaalin wax badan. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa serum-ka wajiga. Dhowr dhibicood ayaa lagu duugaa timo qallalan ama qoyan, iyadoo kuxiran saameynta la rabo. Waxaa lagu dhajiyaa on darfaha oo ay kor u kacdaa. Caadi ahaan sidoo kale waxaa lagu marin karaa madaxa iyo xididdada. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaan markasta aqrinaa tilmaamaha soo saaraha si aan u ogaano isticmaalkiisa saxda ah iyo sida loo qeybiyo.
Serum for timo kasta
Maanta waxaan helnaa fursado badan marka la eego qurxinta. Mid ka mid ah ayaa ah inaan arki karno noocyo badan oo ah waxyaabaha timaha ku saabsan maadada serum. Mid ka mid ah kuwa ugu iibsiga waayadan dambe ayaa ah mid diirada saaraya daryeelka timaha adoo adeegsanaya kuleylka, sidoo kale iska ilaalinaya jahwareerka. Noocyada noocaas ah waxaa badanaa lagu dhajiyaa timo kasta oo lagu maydho si timuhu u waxyeelloobin adoo adeegsanaya qalabka kuleylka sida birta ama qalajiyaha qalajiyaha. Natiijadu waa timo ilaalin leh cuticle xiran, dhalaalaya iyo bilaa kala-goyn. Waa taxane ilaaliya kana hortaga dhaawaca timaha.
El timaha curly waa nooc kale oo timo ah waa inaad raadisaa serum ku habboon astaamaheeda. Waxaa jira qaar kaa caawin kara sidii loo ilaalin lahaa curlka oo loo qoyn lahaa. Timahaani badanaa way qalalan yihiin waxayna lumiyaan iftiinka, marka lagu daro isku dheelitirnaanta si fudud, markaa serumku wuxuu noqon karaa mid si fiican u siyaada oo u siiya qoyaan dheeraad ah waqti ka waqti taas oo ka dhigeysa in curlsooyinka la qeexo oo la qoyo. Frizz waa mid ka mid ah cadawga weyn ee noocan ah timaha.
El serum si loo waraabiyo waa mid kale oo ka mid ah kuwa loogu raadinta badan yahay. Caadi ahaan, haddii aan raadineyno serum tayo leh, waa in si qoto dheer loo qoyaa dhammaan noocyada timaha. Waxaa jira serum xitaa laga heli karo qiimo aad u jaban oo naga caawiya inaan siino dheecaan dheeri ah timaha. Dhibaatada dhamaadka qalalan waa wax had iyo jeer dhaca oo serum ayaa kaa caawin kara joojinta tan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Waa maxay sababta ay tahay inaad u isticmaasho serum timo
Makaroni leh maraqa jiiska jiiska